Karọt dịgasị iche iche Canada F1: nkọwa, foto, njirimara, nlekọta, ịzụ - Karọt iche - 2019
Carrots "Canada" na nkọwa nke ụdị dịgasị iche iche dị ka: "ntinye aka na-esite na ntinye aka nke Dutch (" Shantane "×" Flaccus "), nke e ji nlezianya na-echekwa mma.
Mụta otú ị ga-esi na-eto eto n'ubi gị dị iche iche "Samson", "Tushon", "Queen of Autumn", "Shantane 2461", "Vita Long".
Ụdị oge "oge oge" oge, oge a na-agbanye mgbatị, na-enwe ihe dịka cm 5 cm, ogologo ruo 25 cm. Mkpụrụ osisi dị arọ 100-170 g, ha kacha ibu dị 500 g.
Anụ nke karọt a bụ ihe na-egbukepụ egbuke egbuke, nke dị ntakịrị ka ọ dị otu, ọ bụ naanị ntakịrị agba. Ikpuchi mkpụrụ osisi ahụ dị mma, na-enweghị tubercles, peel na-enye mkpụrụ osisi ahụ mara mma. Osisi na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egbuke egbuke na-etolite na njedebe ike.
Oge iji nweta marketability site na nke mbụ Ome sitere 120 ruo 130 ụbọchị, na ọbụna na n'oge na-adịghị na-akụ ya na-enwe ike iru ndị ọzọ na-ewu ewu dị iche iche na-eto eto.
Mkpụrụ nke carrots "Canada F1" akara 4.5-7.5 n'arọ kwa mita square m nbata; nke a bụ ihe karịrị iche iche Losinoostrovskaya, Nantes, Artek na ihe ndị yiri ya. Ndị amateurs na-enwe mmasị dịgasị iche iche maka ọrịa ndị dị elu, tinyere juiciness na uto uto.
Ị ma? A machibidoro ịzụta ọgwụ nri na EU. Iji nọgide na-ahapụ ụrọ karọt, n'afọ 2001, European Union tinyere iwu na-ekwupụta mkpụrụ osisi carrots.
Uru na ọghọm nke carrots "Canada" gụnyere àgwà ndị a.
nlekota aka na ala;
mma idozi mma n'oge nchekwa nchekwa;
enwere ike iwepu nnukwu mpịakọta na ụzọ usoro;
elu concentration nke beta-carotene (ihe dị ka 21 mg nke carotene kwa 100 g).
Akụkụ ndị ọzọ dị mma nke "Canada F1" gunyere iguzogide okooko okooko (okooko osisi n'afọ mbụ), nakwa nke mmebi ọzọ site na alternariosis na cercosporosis.
anaghị anabata mmiri ala;
etolite ogologo oge;
n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ bụ ngwakọ, mkpụrụ maka ịgha mkpụrụ ga-azụta kwa afọ.
Ị ma? Obere carrots bụ nanị na narị afọ nke 17. Tupu nke ahụ, ọ bụ ọcha, odo, ma ọ bụ ọbụna violet.
Mkpụrụ nke carrots pulitere ji nwayọọ nwayọọ, ya mere, ha kwesịrị ka a ga-akụ nnọọ n'oge. Ọ dịghị mkpa ịkwanye ihe ọkụkụ, ezigbo ihe ọkụkụ - ihe dị ka narị mkpụrụ kwa 1 square. m
Ngwakọ "Canada F1" na-eguzogide ọgwụ ọkụ, ọ nwere ike kụrụ ya na ebe dị mma. A na-ahụ ihe dị mma mgbe ị na-akụ carrots na ebe ndị eyịm, tomato ma ọ bụ poteto na-emebu.
O kwere omume itolite "Canada" n'elu ala kachasị dị iche, mana ọ na-etolite kachasị mma na loams na ájá ájá nke adịghị ike acidity. N'iji ụdị dịgasị iche iche, a ga-enweta ezigbo owuwe ihe ubi na ala dị arọ na ala, ọbụna n'ụrọ, ebe ụdị ndị ọzọ agaghị eto. Otú ọ dị, n'ala ala, mkpụrụ dị mma ma carrots na-eto eto.
Ọ dị mkpa igwu ala tupu oge eruo, karịsịa nlezianya, ma ọ bụrụ na ala dị arọ, ma jụọ mmanụ na ịnweta mmiri.
E nwetara nsonaazụ kachasị mma mgbe ịgha mkpụrụ "Canada" n'afọ iri gara aga nke April ma ọ bụ n'ụbọchị mbụ nke May.
Ọ ga-adị, ihe dị mfe - ịgha mkpụrụ carrots. Ma usoro a nwere àgwà nke ya, nke ọ dị mkpa ka ị tụlee:
a na-ehicha mmiri nke ọma;
a na-eli mkpụrụ na omimi nke 1.5-2 cm;
ịgha mkpụrụ mgbe agha gachara nke ọma.
Tupu ọdịdị ahụ pụta, ebe ndị a kụrụ akụ kpuchiri ya na ihe nkiri agrofibre ma ọ bụ polymer. A na-ebu carrots maka oyi na ọkara nke abụọ nke ọnwa October ma ọ bụ n'oge November, mgbe okpomọkụ ikuku na-ada n'okpuru 5 Celsius.
Na germination nke varietal osisi dị elu, ma ọ bụrụ na ị kụrụ ha akọrọ, ha ga-okpu naanị mgbe 2-3 izu. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na n'ime osisi nke osisi nche anwụ nwere nnukwu mmanụ dị oké mkpa, ọ dịghịkwa ekwe ka mmiri banye na embrayo. Ya mere, tupu ịgha mkpụrụ osisi carrot, ọ dị ha mkpa ka a saa ha na mmiri dị ọcha, wee tinye ha maka mmụba ọzọ.
Ọ kachasị mma iji gbanye mkpụrụ osisi ahụ na ngwọta germination na-akpali akpali, nke kwadebere site dissolving na liter nke mmiri ọkụ:
otu teaspoon nke stimulator "Mmetụta";
ma ọ bụ otu teaspoon nke sodium humate;
ma ọ bụ otu tablespoon nke sifted osisi uyi.
N'ihe ngwọta a, a na-etinye osisi, na-etinye ya n'ime akpa nke anụ ahụ. Mgbe awa iri anọ na anọ, a ga-ewepụ ha, saa ya na mmiri ma, ọbọp na ákwà dị nro, tinye ya ụbọchị atọ n'ime oghere dị na ọnụ ụzọ nke friji - maka ịkasị. Mgbe ị na-amalite ịgha mkpụrụ, a na-ewepu akpa ahụ site na oyi na osisi na-amị ntakịrị ka ha wee nwee ohere.
N'uzo, osisi kwesịrị ịdị anya nke 0,5 cm site na ibe ya, na n'etiti uzo na-ahapụ banyere 20 cm n'etiti ahịrị.
Mgbe 10-14 ụbọchị mgbe germination na-emefu akpa thinning, mgbe ọ na-etisa n'etiti onye ọ bụla Ome, a ga-ahapụ ihe dịka 2 cm. Oge nke abụọ a na-etinye osisi ndị ahụ na ntanetị nke 4-5 epupụta, na-ahapụ ohere nke 4-6 cm n'etiti ha.
Ọ dị mkpa! A naghị enwe ike ịkụnye carrots na ụdị ọ bụla, na-eji naanị akwa ncha.
Ọ bụrụ na ị kụrụ carrots maka ihe karịrị afọ 2 n'usoro n'otu ebe, pests nwere ike emetụta pests, karịsịa carrots. N'okwu a, ọ dị mkpa iji megharịa ahụ "Karate", "Arrivo" ma ọ bụ ụmụ ahụhụ ndị ọzọ. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịdebe ibé ya na eyịm (isiokwu, leek) na-esote ihe ndina karọt ma ọ bụ na-akụ Mint - osisi ndị a na-atụ egwu ya.
Na-anakọta carrots kwesịrị ịbụ ezigbo ụbọchị nkụ - ma ọ gaghị echekwa ya. Tupu nke ahụ, n'etiti etiti, n'oge nke abụọ, a na-ahọrọ mkpụrụ osisi tozuru etozu, a na-amalitekwa iwewe ihe ubi n'August ma ọ bụ September.
Iji mee ka owuwe ihe ubi ahụ ruo ogologo oge, ị ga-edebe iwu ndị a:
ebe nchekwa ga-agba ọchịchịrị, oyi (0-3 Celsius), na ikuku ikuku adịghị karịa 95%;
ọ dịghị mkpa ịsa carrots tupu ịchekwa;
agbaji, enweghi ụdị, mebiri carrots kwesịrị ịjụ;
ọ dịghị ihe karịrị 5-6 n'arọ nke mkpụrụ osisi na-etinye na akpa ọ bụla na fesa ya na ájá ájá, ma ọ bụ carrots na-etinye na stacks, fesa na ájá.
Ọ dị mkpa! Ọ gaghị ekwe omume ịwụsa carrots na ájá ájá.
Ọ bụrụ na ọnọdụ ndị a na-ezute, a na-echekwa carrots ngwa ngwa maka ọnwa 9-10 na ichebe nnu nile na àgwà ndị kwesịrị ekwesị.
Gbalịa na-eto eto a dịgasị iche iche - ọ ga-eme ka o doo anya, ọbụnakwa gafere ihe ị tụrụ anya ya. "Canada F1" na-eweta oke ihe ubi, nke a pụrụ iji mee ihe dị iche iche: ọ bara uru ma raw ma maka nchebe dị iche iche, a na-emegharị ya. Mkpụrụ osisi pulp dị ụtọ ma dị oke mma na-adabara ihe ọṅụṅụ, na-egbuke egbuke ma na-akwadebe puree mama.
Atụmatụ nke na-eto eto Savoy n'ubi - ndụmọdụ maka nlekọta na ọdịbendị foto
Chekwa oge na mgbalị na nchịkọta griin
Ọdịiche dịgasị iche iche - Stroevsky
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Kasị amị mkpụrụ: Canada F1 karọt dịgasị iche iche